शाही सेनाले तपाईंहरूसँग लड्न सक्दैनौँ भने : पासाङ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
शाही सेनाले तपाईंहरूसँग लड्न सक्दैनौँ भने : पासाङ
नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’
साउन १६ गते, २०७२ - १५:५७
माओवादी युद्धका सैन्य कमान्डर नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ सेना समायोजन नहुँदासम्म माओवादी सेनाको प्रमुख रहे । युद्धका वेला माओवादीले गरेको रोल्पाको होलेरी, म्याग्दीको बेनी, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, अछामको मंगलसेन, डोल्पाको दुनै, जुम्लालगायत चार दर्जनजति ठूला तथा साना फौजी आक्रमणको कमान्ड उनैले सम्हालेका थिए । उनको नेतृत्वमा भएको होलेरी हमला चर्चाको विषय बन्यो, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै । होलेरी आक्रमणलगत्तै नेपाली सेना परिचालन गर्ने आफ्नो योजना असफल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए । होलेरी कब्जापछि फिल्डमै पुगेको नेपाली सेना लड्दै नलडी फक्र्यो, बरु त्यहाँ पुगेको तत्कालीन शाही सेना र माओवादी सेनाबीच चिठी आदान–प्रदान भयो । ०५८ असार २८ को होलेरी हमलाका ३६ घन्टाबारे कमान्डर पासाङको बयान :
प्रहरीमाथिको आक्रमणमा एकपछि अर्को सफलता पाइरहेका थियौँ । ०५८ असारतिर ‘अब प्रहरीसँग फाइनल फाइट गर्नुपर्छ’ भन्ने भयो । त्यसअघिसम्म राति आठदेखि एक बजेको बीचमा प्रहरी चौकी आक्रमण गर्ने गरेका थियौँ । हामीविरुद्ध विपक्षीले ‘माओवादी सेना राति लुकेर आक्रमण गर्छन् । दिउँसो आक्रमण गर्ने तागत छैन । यो रातमा चोरेर गर्ने काम हो’ भन्ने भ्रम फैलाइरहेका थिए । हामी ती भ्रमपूर्ण प्रचारलाई झुट साबित गर्न चाहन्थ्यौँ । ‘अब प्रहरीसँग दिउँसो लड्नुपर्छ, जुन प्रहरीसँगको अन्तिम लडाइँ होस्’ चाहन्थ्यौँ । पार्टीले पनि त्यही योजना ल्यायो ।
मलाई पार्टीले उपयुक्त स्थानको सर्भे गर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो । ‘आक्रमणका लागि सबैभन्दा उत्तम भालुबाङ हुन्छ’ भन्ने निष्कर्ष निकालेँ । तीन दिनसम्म भालुवाङमा बसेर ‘सर्भे कम्प्लिट’ गरेँ । दुर्भाग्यवश आक्रमणका लागि शक्तिकेन्द्रित गर्दैगर्दा ‘प्लान एक्सपोज’ भयो ।
भालुवाङको योजना खुलेपछि घोराही गएर बसेँ । अब ‘कहाँ आक्रमण गर्ने त’ भन्ने भयो । तुलसीपुरमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ बन्यो । र, म त्यसको सर्भेमा लागेँ । तर, क्याम्पको नजिक पुगेर सर्भे के सुरु गरेको थिएँ, प्रहरीलाई मेरो गतिविधि शंकास्पद लागेछ । पिछा गर्न थालिहाल्यो । धेरै माथिसम्म पिछा गर्दै आयो । म सामान्य मान्छेजस्तो गरी हिँडेपछि उसले छोड्यो ।
दुवै योजना असफल भए । एउटा योजनाकार, कमान्डरलाई ‘प्लान एक्सपोज’ हुनुजस्तो पीडा अरू हुँदो रहेनछ । तर, युद्धको कुरा थियो । निराश हुनुपर्ने कुरै थिएन ।
कमिसार अनन्त हुनुहुन्थ्यो । तुलसीपुरबाट लखेटिएको साँझ उहाँसँग भेट भयो । हाम्रो फोर्स दाङमा जम्मा भइसकेको थियो । मैले अनन्तलाई ‘भालुबाङ खुल्यो, तुलसीपुर थाहा पाइहाल्यो । अब ठूलो आक्रमण सम्भव भएन । सानो त सानै हुन्छ । तर, माथितिर गएर होलेरीको इप्रकालाई दिउँसै बजाइदिऔँ’ भनेँ । ‘इलाका प्रहरी कार्यालय, होलेरीमाथि नै आक्रमण गरौँ’ भन्ने योजना बन्यो ।
हेलिकोप्टर त्यहाँबाट पनि उड्यो । र, हामी भएकोमै ल्यान्ड गर्न खोज्यो । हामीले त्यो हेलिकोप्टरमाथि नै आक्रमण गर्‍यौँ । हेलिकोप्टर धुवाँ छोड्दै आकासियो । साथीहरू ‘अब झर्‍यो, झर्‍यो’ भन्दै खुसीले ताली बजाउँदै थिए । तैपनि, पाइलटले नियन्त्रण गर्दै लग्यो । बुढागाउँमा ल्यान्ड गर्‍यो । एकजना मरेछ । एउटाको हातखुट्टा भाँचिएछन्
अरू कमान्डरसँग पनि सल्लाह गर्‍यौँ । होलेरी आक्रमण गर्न कुनै सर्भे गर्नुपर्ने थिएन । हामी एक तहका कमान्डर पूर्ण जानकार थियौँ । ‘सामान्य रोकल गर्ने, बिफ्रिङ गर्ने र होलेरीको चौकी उठाउने’ भन्ने योजना बन्यो । हाम्रो टोली रोल्पाको उगातिर उक्लियो ।
असार २७ गते (०५८) राति नौ बजेतिर उगामा जम्मा भयौँ । मध्य राति १२ बजेसम्म प्लानिङ गर्‍यौँ । चार बजे ‘एट्याक’ गर्ने योजना बनाएर मध्य राति दुई बजे जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्‍यौँ ।
हामी ‘मुभ’ भयौँ । भाले पनि बास्यो । गस्तीमा आएका प्रहरी टोलीलाई चारैतिरबाट घेरेर भित्र लैजाने र ‘एट्याक’ गर्ने ‘प्लान’ थियो । हामी जाँदा केही टोली बाहिरै थिए । ‘अब त उज्यालो भयो, जाऔँ’ भन्दै थिए । नजिकै पुगिसकेका हामीले चुप लागेर उनीहरूका कुरा सुन्यौँ । उनीहरू स्लिपिङ ब्याग टकटक्याउँदै क्याम्पतिर लागे । सबै होलेरी बजारभित्र प्रवेश गरे । धेरैजसो ब्यारेकमा प्रवेश गरेका थिएनन् । हाम्रो घेराबन्दीमा परिसकेका थिए । त्यहीवेला मैले कासन गरेँ, ‘ल तिमीहरू सबै हाम्रो घेरामा परिसक्यौ । हात उठाओ, हतियार बुझाओ र आत्मसमर्पण गर । नत्र एकजना पनि बच्नेवाला छैनौ ।’ हामीले फायर पनि खोल्यौँ । केही प्रहरीले तत्कालै हात उठाइहाले । केही सिस्नुको झाङमा छिरे । कोही घरभित्र छिरे । सर्च गर्दै जाँदा सबैले आत्मसमर्पण गर्दै गए । एकजना प्रहरी क्रस फायरमा परे । हाम्रो उद्देश्य मार्नु थिएन, सबैलाई कब्जामा लिनु थियो । चौकीमा रहेका ७० मध्ये ६९ जनाले आत्मसमर्पण गरे । हतियार बुझाए । हामी उज्यालोमा रमाइलोसँग फर्कियौँ ।
उनीहरू आत्तिए । र, ठूलो स्वरमा एउटाले जवाफ दियो, ‘होइन, हामी तपाईंहरूसँग लड्न आएको होइन, हामीलाई यहाँ तालिम भनेर पठाइएको हो । हामी लड्न चाहँदैनौँ । बरु, भेटेर कुरा गरौँ ।’ हामीले ‘त्यसो हो भने हामी पनि तल बाटोमा विनाहतियारका दुईजना पठाउँछौँ, तिमीहरू पनि विनाहतियारका दुईजना पठाओ । तिमीहरूको कुरा लेखेर पठाओ’ भन्यौँ । उसले ‘हुन्छ’ भन्यो
रोल्पाकै करेटी गाविसको ह्याङ गाउँमा ‘रिट्रिट प्वाइन्ट’ बनाएका थियौँ । २८ गते दिउँसो त्यहाँ पुगेर खाना खायौँ । आत्मसमर्पण गरेका सबै प्रहरीलाई सँगै लिएका थियौँ । उनीहरूलाई रेडक्रसमार्फत मुक्त गर्ने हाम्रो योजना थियो । त्यस दिन ह्याङमै आराम गर्‍यौँ । रात पनि त्यहीँ बित्यो । कब्जा गरिएका हतियार विभिन्न टोलीका लागि बाँडफाँड गर्न भनेर भोलिपल्ट बिहानैदेखि काम थाल्यौँ ।
त्यहीवेला आकाशमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर घुम्न थाल्यो । आक्रमण गर्नुअघि पनि हामीविरुद्धमा आर्मी परिचालित हुन सक्छ भन्ने आँकलन गरेका थियौँ । तर, मुठभेडमै नआउला भन्ने लागेको थियो । आइहाले आक्रमण गर्ने तयारी थियो । किनकि, प्रहरीपछि हाम्रो लडाइँ आर्मीसँग नै हुन्थ्यो । सुरुमा एमआई–१७ हेलिकोप्टर हामीनजिकैको नागामा ल्यान्ड गर्‍यो । त्यहाँ एक प्लाटुन शाही सेना ल्यान्ड गर्‍यो । अर्को हेलिकोप्टरले बुर्तिबाङमा ल्यान्ड गर्‍यो । नागामा ओर्लिएका आर्मी हामीभन्दा माथि थिए । हामी सीधै तल थियौँ । त्यो टिमले हामीलाई सर्लक्कै देख्यो ।
उनीहरूको योजना बुर्तिबाङको टिमले तलबाट नाकाबन्दी गर्ने र नागाको टिम हामी भएतिर आउने देखियो । नागाको फोर्सलाई हेलिकोप्टरले उठायो र हाम्रो एक किलोमिटर नजिकको दूरीमा ल्यान्ड गर्‍यो । हामीसँग लड्नुको विकल्प थिएन । हामीले त्यो फोर्सलाई रोक्न हाम्रो फोर्सलाई पठायौँ । त्यहीवेला घाइते, कब्जा गरिएका हातहतियार, कब्जामा परेका प्रहरीलाई अन्यत्रै पास गर्नतिर लाग्यौँ । हेलिकोप्टर त्यहाँबाट पनि उड्यो । र, हामी भएकोमै ल्यान्ड गर्न खोज्यो । हामीले त्यो हेलिकोप्टरमाथि नै आक्रमण गर्‍यौँ । हेलिकोप्टर धुवाँ छोड्दै आकासियो । साथीहरू ‘अब झर्‍यो, झर्‍यो’ भन्दै खुसीले ताली बजाउँदै थिए । तैपनि, पाइलटले नियन्त्रण गर्दै लग्यो । बुढागाउँमा ल्यान्ड गर्‍यो । एकजना मरेछ । एउटाको हातखुट्टा भाँचिएछन् ।
त्यसपछि हेलिकोप्टर आएन । हामी नुवागाउँतिर ओर्लियौँ । आर्मीको दुईवटा प्लाटुन भएको हुनुपर्छ, उनी पनि खोल्साबाट तलतिर झरे । हामी ‘अब यो फोर्सलाई यहीँ घेर्नुपर्छ’ भन्नेमा पुग्यौँ । हाम्रो आधा फोर्स पहिल्यै पारिपट्टि पुगिसकेको थियो । हामी पनि पुग्यौँ । आर्मीहरू नुवागाउँको मुख्य सडकबाट माथि उक्लिए । डिभेन्स लिएर बसे । हामीले घेरा कस्दै नजिक पुग्यौँ । दुवैतर्फको ‘फायर रेन्ज’ एक–अर्कालाई ‘इफेक्ट’ गर्ने खालको थियो । हामीले त्यसअघि फायर खोलिसकेका थियौँ । फायर बन्द गर्‍यौँ । उनीहरू फायर नखोलेर डिफेन्स पोजिसनमा बसिरहे । उनीहरूले फायर खोल्दा, त्यहाँबाट मुभ हुँदा कब्जा गरिहाल्ने प्लानमा थियौँ । उनीहरू जुन बाटोबाट आएका थिए, त्यहीँबाट आक्रमण बढाउने र अन्यत्रबाट घेराबन्दी गर्ने योजनामा थियौँ । उनीहरू चुपचाप बसिरहे ।
चुपचाप बसिरहेका वेला आक्रमण गर्नु युद्धको नियमभित्र पर्दैन । त्यसपछि के गर्ने भन्नेमा अनन्तजी र मैले सल्लाह गर्‍यौँ । आक्रमण गर्ने, बाटो खोलेर जान दिने वा कुरेर बसिरहने विकल्प थियो । कुरेर बसिरहँदा हाम्रो ‘टाइम लस’ हुन्थ्यो । अनन्तजी र मैले एकचोटि माइकिङ गरेर ‘तिमीहरू हाम्रो घेरामा छौ । किन आएको, कहाँ आएको ? वार्ता गरौँ’ भन्ने, त्यसपछि त्यसको उत्तर के आउँछ, त्यसबमोजिम अघि बढ्ने सल्लाह गर्‍यौँ । मैले माइकिङ गरेर भनेँ, ‘तिमीहरू यहाँ कहाँबाट किन आएका हौ ? तिमीहरू सबै हाम्रो घेराबन्दीमा छौ । लड्न आएका हौ भने तिमीमाथि हामी एट्याक गर्छौँ । तिमीहरू हामीबाट उम्कने चान्स छैन । चारैतिरबाट घेराबन्दीमा छौ ।’
त्यसो भन्दा साथीहरूले चारैतिरबाट हवाई फायर खोले । त्यसपछि उनीहरू आत्तिए । र, ठूलो स्वरमा एउटाले जवाफ दियो, ‘होइन, हामी तपाईंहरूसँग लड्न आएको होइन, हामीलाई यहाँ तालिम भनेर पठाइएको हो । हामी लड्न चाहँदैनौँ । बरु, भेटेर कुरा गरौँ ।’ हामीले ‘त्यसो हो भने हामी पनि तल बाटोमा विनाहतियारका दुईजना पठाउँछौँ, तिमीहरू पनि विनाहतियारका दुईजना पठाओ । तिमीहरूको कुरा लेखेर पठाओ’ भन्यौँ । उसले ‘हुन्छ’ भन्यो । दुवै पक्षका दुई–दुईजना मान्छे सडकमा भेट भए ।
हाम्रा साथीहरूले उनीहरूको तर्फबाट प्रेषित चिठी लिएर आए । चिठीमा ‘हामी लड्न आएका होइनौँ, तालिममा पठाइएको हो । हाम्रो लड्ने चाहना पनि होइन र तपाईंहरूसँग लड्न पनि सक्दैनौँ । हामीलाई बाटो खोलिदिनुहोस् । हामी जान्छौँ’लेखिएको थियो । अनन्तजीले ‘होलेरीतर्फबाट बाटो खोलिदिन्छौँ । त्यही बाटो जाओ । अन्यन्त्र नलाग्नू’ भन्ने चिठी लेख्नुभयो । त्यो चिठी उनीहरूकोमा पुग्यो ।
वार्ताको कुरा पनि चलिरहेको थियो । वीरेन्द्र माओवादी समस्या वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा थिए । त्यही भएर वीरेन्द्रले गिरिजाप्रसादको कुरा नसुनेको पनि हुन सक्छ । त्यही घटनाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आए । माओवादी–सरकार वार्ता भयो । तर, वार्ताबाट निष्कर्ष निस्किएन
उनीहरू ‘हुन्छ, हामी तपाईंहरूले भनेको बाटो जान्छौँ । बाटो खोलिदिनुस्’ भने । हामीले त्यो साइडको बाटो खोलिदियौँ । उनीहरू गएपछि हामीले पूरै घेरा खाली गर्‍यौँ । त्यसवेला साँझको साढे ६ जति भइसकेको थियो । २८ गते बिहानदेखि सुरु भएको लडाइँ २९ साँझ साढे ६ बजेतिर सकियो । हामी दुम्लातिर लाग्यौँ । साँझ दुम्ला पुग्यौँ । साँझ रेडियो सुनेको त ‘शाही नेपाली सेनाले नुवागाउँमा माओवादीविरुद्ध घेरा कसिरहेको छ । माओवादीका कमान्डरहरू घेराबन्दीमा छन्’ पो भन्छ । हामी सबै मजाले हाँस्यौँ । र, विकेन्द्रित भयौँ ।
त्यसवेलासम्म हामीसँग स्याटलाइट फोन थिएन । पार्टीको हाइकमान्डमा तुरुन्तै रिपोर्ट गर्ने सम्भावना थिएन । हामीले दाङको योजना खुलेको र अन्यत्र आक्रमण गर्दा पनि शाही नेपाली सेना परिचालित हुन सक्ने रिपोर्ट गरिसकेका थियौँ । केही दिनपछि सबै घटना, विवरण हेडक्वार्टरमा पुर्‍यायौँ । हेडक्वार्टरले धन्यवाद भन्यो । हाम्रो कब्जामा रहेका प्रहरीलाई केही दिनपछि आइसिआरसीमार्फत बुझायौँ ।
होलेरी घटनाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, राजा वीरेन्द्र र शाही नेपाली सेनाबीचमा ठूलो अन्तरविरोध पैदा भयो । गिरिजालाई सेना परिचालन भएन, माओवादीलाई चारैतिरबाट घेरेन भन्ने लाग्यो । तर, सेना त परिचालित भएकै हो । उनीहरू हामीसँग मुठभेड गर्न नसक्ने भएपछि वा उनीहरूको हाइकमान्डले अहिले मुठभेड गर्ने वेला भएको छैन भनेर होला, मुठभेड नगरेको । मुठभेड गरेको भए सबै सखाप हुन्थे ।
उनीहरूले सुरक्षाका लागि बुद्धि पुर्‍याएको हुनुपर्छ । गिरिजालाई लाग्यो, राजाले सेना परिचालन गरेनन् । राजा वीरेन्द्रलाई लाग्यो होला, अहिले सेना परिचालन गर्ने वेला भएको छैन । वार्ताको कुरा पनि चलिरहेको थियो । वीरेन्द्र माओवादी समस्या वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा थिए । त्यही भएर वीरेन्द्रले गिरिजाप्रसादको कुरा नसुनेको पनि हुन सक्छ । त्यही घटनाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आए । माओवादी–सरकार वार्ता भयो । तर, वार्ताबाट निष्कर्ष निस्किएन । त्यसपछि हामी सचेत ढंगले शाही नेपाली सेनासँगको लडाइँमा अगाडि बढ्यौँ । त्यसैको उपज हो, ०५८ मंसिर ८ गते घोराहीमा गरेको आक्रमण ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका लागि नेत्र पन्थीले गरेको पासाङसँगको कुराकानीबाट साभार
साउन १६ गते, २०७२ - १५:५७ मा प्रकाशित
द्वन्द्वकालमा दोहोरो भीडन्तमा परी ज्यान जोगाएका सेनाकाे ‘सिपाहीको डायरी’ विमोचित
यी हुन् मदन पुरस्कारका लागि छानिएका ७ कृति
‘उज्यालाकोे खोजी’ र ‘प्रयास’को विमोचन
लुरे मुग्लान र रातो बाकस- भाग ३
दुव्र्यवहारविरुद्ध चेतनामूलक सडक नाटक सम्पन्न
‘जस्ट ह्याङ्ग माइसेल्फ’
लुरे मुगलान र रातो वाकस
‘संकटमा रातो रंग’
गोठको एऊटा भित्तामा ‘छाऊगोठ’
मन परेको सुन्दर फुल, अर्कैको भाग लाग्यो
परदेशी पापाको मन
जब फिता चुट्टिएपछि…
कोलकातामा नेपाली ‘उपियाँ’ मञ्चन हुँदै
यी आठ साहित्यकारलाई सम्मान गरिदै